Netwọk Kọmputa maka SMEs: Okwu Mmalite | Site na Linux
Netwọk Kọmputa maka SMEs: Okwu Mmalite
Pikico | | GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ndewo ndị enyi !.
Mgbe ihe karịrị afọ 2 na ọkara anọghị na oghere dijitalụ a, nke anyị na-atọ ụtọ nke ukwuu ịgụ isiokwu gị, anyị laghachiri iji nọgide na ntinye nke ihe ọmụma anyị dị ala na ụwa nke Free Software.
Dị ka anyị na-ekwukarị, ị ga-ahụ naanị “Otu ụzọ ntinye” n’otu isiokwu ọ bụla. Anyị anaghị eme ka ànyị ma ihe niile, ma ọ bụkwanụ mee ka à ga-asị na anyị gbanwere ihe ọmụmụ magburu onwe ya anyị na-ahụ n'akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ nwoke nke iwu ọ bụla; na ederede ndi ozo edeputara na WWW Village; akwụkwọ pụrụ iche; wikis raara nye mmemme ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ; akwụkwọ, wdg.
Anyị enweghị oge ma ọ bụ ihe ọmụma zuru ezu iji bipụta ihe magburu onwe ya dịka akwụkwọ dị na PDF format «Nhazi Server na GNU / Linux«, Site n’aka onye edemede Joel Barrios Dueñas, compendium nke anyị na-akwado nke ọma maka ọmụmụ ihe ọfụma - nke abụghị naanị ịgụ akwụkwọ ngwa ngwa na mmejuputa ya, nye ndị na - eji CentOS, OpenSUSE, Debian, ma ọ bụ usoro LINUX ọzọ.
Anyị ga-amalite usoro nke isiokwu Kọmputa netwọk, dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ụlọ ọrụ obere na ọkara ma ọ bụ Ndị SME, dị ka aha ya edebanyere aha na mba ndị na-asụ Spanish.
Anyị nwere olile anya na mbọ na oge ewepụtara maka ịkwadebe isiokwu niile a ga-akwụ ụgwọ site n'ịgụ gị na uru ị na-anọchi anya ya.
2 Edemede edemede
2.3 EKPERE, Isc-Dhcp-Server, na Dnsmasq
2.4 Akụrụngwa, nyocha na Ọrụ
3 Isiokwu ụfọdụ ga-ekpuchi ma tụlee
3.1 Nyocha na Ọrụ Ọrụ gbakwasara SME
4 Nkwado mmekọrịta
Ndị na-ahụ maka ijere ụdị netwọkụ a ozi, ma aha ha bụ ndị ọchịchị, Ndị nchịkwa Network, Ndị nchịkwa Sistemụ, Sysadmin, ma ọ bụ aha ọzọ, anyị nwere ibu ọrụ ịnye n'ụzọ doro anya maka onye ọrụ nke ebe ọrụ, usoro dum Ọrụ Netwọk kedu ka ha si Mkpebi Aha Ngalaba; Dynamic Ọrụ nke Adreesị IP; Ịntanetị; Izi ozi na Ọrụ Ozi Kọmputa; Ọrụ nyocha Onye ọrụ na Igwe, na ogologo wdg nke ọrụ ndị ọzọ ga-adabere na njedebe na nzube nke Network.
Anyị ga-ahụ ụdị dị iche iche, nha, na ebumnuche nke Netwọk Kọmputa: ụfọdụ dị mfe na ndị ọzọ dị mgbagwoju anya; ụfọdụ iji nye Office na Accounting ọrụ dị ka isi; ndị ọzọ nwere ọrụ pụrụ iche nke Kọmputa Enyemaka Ejiji, ma ọ bụ CAD; netwọk nke igwe na ndị ọrụ ọkachamara na mmemme mmemme dị iche iche, na nkenke, El Mar.
Akụkụ na ọdịnaya nke Network Network dị ka Christopher Columbus kwuru: "La Mar Oceana". Ihe atụ kachasị, n'echiche m: Obodo WWW ma ọ bụ Intanet.
Ọ ga-abụ nzuzu, na-anwa ịkọwa ụdị dị iche iche nke netwọkụ nwere ike ịdị, yana nke ọ bụla nwere ike ọrụ anyị nwere ike ịchọ maka otu netwọkụ.. Anyị abụghị ndị ara, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ ihe anyị chere. 😉.
Ya mere, anyị ga-elekwasị anya na ihe nkịtị nke ga-abụ a Klas «C» Network Mpaghara Gburugburu, jiri ọtụtụ arụmọrụ ya na sistemụ arụmọrụ Microsoft © Windows yana ịnweta ịntanetị. Anyị ga-atụle ọrụ ndị dị mkpa na nke a kacha eji.
Ndepụta nke bipụtara isiokwu -n’usoro ezi uche dị na ya ma nweere onwe ya site na ụbọchị mbipụta- nke a ga-emelite kwa izu, bụ ihe ndị a:
Nkesa karịrị oge Linux nkesa
Ntọala nrụnye ọrụ
6 Debian Desktọpụ
Ihe ngosi CentOS
Ngwa ngwa ma maa mma KDE na openSUSE 13.2 Harlequin
Virtualization na Debian: Okwu Mmalite
Qemu-Kvm + Virt-Manager na Debian
iwu-iwu na Debian
Virt-Manager na virsh: Ime nchịkwa site na SSH
CentOS 7 Hypervisor M
CentOS 7 Hypervisor nke Abụọ
Neti SME: nke mbụ mebere ịkpụ
EKPERE, Isc-Dhcp-Server, na Dnsmasq
DNS na DHCP na emegheSUSE 13.2 "Harlequin"
DNS na DHCP na CentOS 7
DNS na DHCP na Debian 8 «Jessie
Ohere na-arụsi ọrụ Directory®
Dnsmasq na Ọrụ ndekọ ®
Akụrụngwa, nyocha na Ọrụ
[Opinion] Akụrụngwa na Ọrụ Nyocha
Nhazi na njikwa na netwọk
Nyocha Squid + PAM
Ọ bụrụ na anyị elee anya nke ọma, anyị na-anwa ịnye nkọwa nke otu esi eche ihu na mmejuputa nke SME Network, na-ewere dị ka mmalite nke nkesa abụọ gbadoro ụkwụ na azụmahịa ụwa -CentOS / Uhie okpu y emegheSUSE / SUSE- na nkesa kachasị n'ozuzu dị na Linux Universe, nke anyị chere bụ Debian.
Usoro nke njikọ ndị gara aga abụghị oge na-emetụta oge gbasara ụbọchị e bipụtara isiokwu ọ bụla. Kama nke ahụ, ọ na-emetụta mmasị anyị nwere ka a gụọ ha n'usoro ahụ. Ọ bụrụ na anyị elee anya nke ọma, anyị ga-ahụ:
Mbụ anyị na-ekwu ihe mere anyị ji họrọ Ogha ekwuru n'elu, dabere na Nkesa karịrị oge nke Linux nkesa.
Mgbe ahụ, anyị mere onwe anyị ọrụ kwesịrị SysAdmin, ma na Debian ma na-emegheSUSE.
Mgbe e mesịrị, anyị na-amụta otu esi arụ Hypervisor arụmọrụ, nke ga-akwado sava sava niile anyị chọrọ.
Mgbe ahụ anyị ga-abụ akụkụ nke ihe nkesa akụrụngwa. Anyị na-ekwu "akụkụ" n'ihi na Network Oge Protocol Anyị ga-ahụ ya mgbe anyị metụrụ isiokwu nyocha.
Isiokwu ụfọdụ ga-ekpuchi ma tụlee
Nyocha na Ọrụ Ọrụ gbakwasara SME
Nyocha PAM. Mmezu nke ọrụ maka netwọk, na nyocha na ikike site na nzere nke ndị ọrụ debara aha na otu sava:
Ihe nkesa dabere na CentOS 7 -n’ebe ihu na ntaneti abuo- ya na desktọọpụ MGBE, NTP, DNSmasq, CentOS / Uhie okpu FirewallD, Runway - Gateway maka ịnweta Internetntanetị, Njikwa onye ọrụ site na eserese eserese, Skwid, wdg.
Nchịkwa ndị ọrụ mpaghara na Iwu Paswọdu.
Sava ozi Ntughari - Usoro XMPP
Ọrụ ndekọ na-eduga na OpenLDAP
Nchịkwa ngalaba - Ọrụ ndekọ na-adabere na Samba 4 ma ọ dịkarịa ala abụọ n'ime nkesa ndị ahọrọ.
Njikwa faili maka Netwọk Microsoft © sitere na Samba4
Proftpd dabeere na Ọrụ Nyefee Njikwa
Ihe nkesa nke OwnCloud
Ọrụ ndị ọzọ na-adịchaghị mkpa, mana a na-eji ya eme ihe
Maka ndị bidoro na Nchịkwa Ọrụ ma ọ bụ ndị chọrọ ịmụ maka ọrụ a, anyị na-akwado ike ịmalite site na mbido, yana n'usoro a chọrọ.
Ndị chọrọ ịhụ mbara igwe zuru oke karịa nke a chọrọ, nwere ike ịga na saịtị Internetntanetị dị iche iche raara nye isiokwu na Netwọk na Ọrụ. Enwere otutu ha n'asụsụ Spanish, Bekee, yana n'ọtụtụ asụsụ ndị mmadụ na-asụ n'ụwa a.
Na mgbakwunye, anyị na-eme atụmatụ ide obere usoro nke isiokwu FreeBSD nke mere na a maara onye a ntakịrị Amaghị Giant nke Free Software.
Ọ bụrụ na Mahadum, Schoollọ Akwụkwọ, itutionlọ Ọrụ ma ọ bụ Companylọ Ọrụ ọ bụla nwere mmasị itinye usoro nkuzi dị anya na isiokwu ndị metụtara na ndị dị mkpa ịgụnye, biko degara anyị akwụkwọ na-enweghị obere obi abụọ ma ọ bụ igbu oge. Lee anyị bụ maka gị.
Anyị na-echere gị na ntinye ọzọ anyị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Netwọk Kọmputa maka SMEs: Okwu Mmalite
Ndewo, Ezi Fico ... usoro gara aga dị ezigbo mma ma ana m atụ anya nke a ...
Biko gbaa mbọ hụ na ngalaba email ahụ abụghị nke '' enwere ike '', ọ bụ nkwupụta!
Jisie na usoro, m ga-eso ya.
N'ime ọdịnaya kachasị mma m gụrụ, m na-atụ anya na ọkwa ndị ọzọ. Daalụ Fico!
Nkwalite magburu onwe ya, ana m amalite na nchịkwa nke netwọk na ejiri m n'aka na usoro a ị na-atụ aro ga-abụ ezigbo enyemaka na nduzi.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịza ajụjụ n'aha ndị otu DesdeLinux. Site n'enyemaka dị oke ọnụ nke ndị Luigys a ma ama, echere m na anyị nwere ike ịnụ ụtọ nkeji ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụghị taa, echi.
Agwa Hanibball dijo
Kedu ka o si dị mma, nke a dabara m dị ka uwe aka, Ana m eche akwụkwọ.
Zaghachi na Hanibball Bean
Usoro a na-ekwe nkwa ọtụtụ, ihe karịrị ahụmịhe doro anya nke Fico, gbakwunyere ụzọ magburu onwe ya ederede na ederede, na-eme ka mmadụ too na ihe ọmụma n'ọtụtụ ebe.
Ana m ekele gị nke ukwuu Fico maka ezi uche gị na onyinye gị magburu onwe ya.
Ale mmadụ dijo
The post dị mma nke ukwuu, dị ka mgbe niile, ọ na-ewetara anyị ihe kacha mma nke ya amamihe.
Zaghachi Ale humanOS
Magburu onwe ya .. na-eche ihe ndị a, ezigbo Ama!
Enwere m mmasị na atụmatụ ahụ Fico na-eweta, ọ dịla ogologo oge m gụrụ isiokwu ndị ị mere. N'ezie ihe niile dị na ndụ na-amalite na isi. Site na mbido na ekele n’usoro ihe a nke bụburu eziokwu maka m, n’ihi na ị datụbeghịrị anyị; Ndị nchịkwa netwọk SME ga-agbasawanye ọhụụ anyị.
Dị ka Hanibball Bean ga-ekwu ụbọchị ole na ole gara aga, ọ bụ ihe zuru oke, ọ bụghị naanị maka ndị na-amalite, ọbụlagodi ndị nwere ahụmahụ m maara na ha ga-aga n'ihu. Sl2 na chi oma unu niile.
Ah, echefuru m ikwu na obere usoro isiokwu gbasara FreeBSD bụ nke kachasị ọhụrụ na atụmatụ gị.
Daalụ maka ịza ajụjụ, enyi Crespo88 !!!. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ndị hụrụ Linux nwere mmasị na FreeBSD Free Software. Anyị ga-enwe ohere ịchọpụta ma ọ bụrụ na ọ dị otu a.
Ọfọn, anyị na-eche.
Hi Fico: Agụrụ m okwu ọhụrụ nke post "Netwọk Kọmputa maka SMEs - Okwu Mmalite" na enwere m mmasị n'echiche nke "... ide obere usoro isiokwu gbasara FreeBSD iji mata nke a Unknown Giant of Free Software ntakịrị. » iji okwu nke gi. N'ihi ya, m na-enye mbido ịmalite ịmalite ime ihe na nkesa UNIX a n'efu.
Enwere m mmasị na posts 2 gbasara nyocha.
Na ọrụ ntanetị gbadoro anya na SME, ọkachasị na "Ọrụ Nbufe Faịlụ dabere na Proftpd" ka ohere gị wee hụ ma ọ ga-ekwe omume iji mezuo nyocha site na iji ndị ọrụ Directory dabere na Samba 4 kama nke ndị ọrụ mpaghara.
Told gwara m ka m chetara gị isiokwu ndị edeburu na DNS Bind a howto on how to implement the Public Views.
Ọ dịghị ihe m na-atụ anya… ..
Zaghachi na Iwo
Ekele IWO!. Anyị ga-ahụ otu anyị si emeju arịrịọ gị. Gaa n'ihu na anyị na ị gaghị akwa ụta na ya!, 😉
Echichi --lọ Ọrụ - Netwọk Kọmputa maka SMEs
1.9.23 Wine dị ya na nkwado maka Myst V: Ọgwụgwụ nke afọ